PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-25 - Bayaveva kuvalwa ukugqebheza
Bayaveva kuvalwa ukugqebheza
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-25 - IZINDABA - DELI MNCWABE
BAYAVEVA abasebenzi bomdlalo iMbewu: The Seed kulandela ukuthi beyalelwe ukuthi bayeke ukugqoka izigqebhezane nokuveza amabele emsebenzini.
Abasebenzi abebethukuthele beveva ngalokhu bapotshezele Isolezwe ngeSonto ngenkilayitheka ababhekene nayo kulo mdlalo okhonjiswa ku-e.tv phakathi nesonto.
Laba abacele ukungadalulwa ngoba besaba ukuxoshwa, bathe emasontweni adlule babizelwe emhlanganweni ophuthumayo obubizwe ngesinye sezikhulu sesifazane. “Kulo mhlangano satshelwa ukuthi bonke abesifazane abahlukane nokukhinda baveze amathanga nokugqoka izinto eziveza amabele obala ngoba akwamukelekile kule ndawo yokusebenza. Sathi sisaxakekile sonke ukuthi kwenzakani, sabe sesisatshiswa ngokuthi uma singahambisani nalokhu sizokhonjwa esifike ngayo. Namanje sisazibuza ukuthi kanti kwenzekani. Zingenaphi izingubo nokugqoka kwethu,” kusho omunye wabasebenzi.
Yize umhlangano wawuhanjelwe yibo bonke abasebenzi kodwa kuthiwa kwahlala obala ukuthi wawuqondiswe kwabesifazane ngoba isikhulu sathi uma bekhinda baheha amadoda ngamathanga abo. “Umsebenzi wakwiMbewu unzima kabi ukuthi ungalibala wukuheha amadoda ngamathanga njengoba sekushiwo. Sifisa iziphathimandla zilusukumele lolu daba,” kusho omunye wabasebenzi.
Okhulumela iMbewu, uNilesh
Singh, uthe phakathi kwemithetho yenkampani ekhiqiza umdlalo (iVideovision Entertainment
) ikubeka obala ukuthi wonke umsebenzi kufanele agqoke ngendlela ehloniphekile.
“Phakathi kwemithetho yenkampani ekhiqiza umdlalo ukuhlonipheka kungungqaphambili. Lokhu kubalwa nasendleleni abasebenzi abagqoka ngayo,” kusho uNilesh.
Uqhube wathi abanalwazi ngokusatshiswa ngokuxoshwa kwabasebenzi abangahambisani nalokhu.
Omunye umsebenzi uthe ziningi izinkinga ngaphakathi kwiMbewu: The Seed.
“Ngikhuluma nje iningi labasebenzi linokhwantalala, awukho nomdlandla wokusebenza ngoba kunezinhloko zeminyango ezikhaca abasebenzi noma yikanjani.”
Uthe alishoni ilanga ungezwanga kukhona obizwa ngesilima, isidomu, ivila noma kuthiwe umuntu wangena ngetiye akawazi umsebenzi.
“Kunento abathanda ukuyisho, bathi sicabanga ukuthi ikuMuvhango la kwiMbewu. Asazi ukuthi ichaza ukuthini kodwa bayathanda ukuyisho ihambisane nokuthi abantu bayizidomu novilavoco abangawazi umsebenzi,” kuchaza umthombo.
Kuthiwa abanye sebehamba befesa befuna imisebenzi kwezinye izindawo ngenxa yesimo esibi okusetshenzwa kusona kwiMbewu.
UNilesh uwuhlabe inhlali ngezinsolo zokukhacwa kwabasebenzi kodwa wathi abanalwazi ngokuthi kunabasebenzi abanokhwantalala kwiMbewu.
ABALINGISI bomdlalo wethelevishini iMbewu: The Seed abayalelwe ukuthi bangazilokothi izigqebhe nokuveza amabele imsebenzini